नेविगेशन मुख्य सपनाहरु फैशन स्वास्थ्य Recipes युक्तिहरु चिन्हहरू 12>> श्रेणी विधि विश्राम कोठा संग डिजाइन स्नान स्नान लामो देश घरमा एक सफल छुट्टी को एक अनिवार्य विशेषता भएको छ। आन्तरिक डिजाइन स्नान वा सना आज, कुनै पनि शैली मा तिनीहरूलाई धेरै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सबै बस कल्पनाले र वित्तीय क्षमताहरु मा निर्भर गर्दछ। स्नान बाफ कोठा र विश्राम कोठामा राखिएको एक नियम, रूप। यी दुई क्षेत्रमा कुनै पनि डिजाइन निर्णय कार्यान्वयन गर्न धेरै अवसर प्रदान। सौना गर्मी र waterproofing मा पालन गर्न - एकै समयमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान दिनुहोस कि। सबै सजावट सामाग्री राम्रो उच्च चिस्यान सहन र ढुसी द्वारा संक्रमण प्रतिरोध गर्नुपर्छ। डिजाइन बाफ स्नान यस कोठा को पुनर्जनन सुविधा र सान्त्वना जोड भनेर सरल सफा लाइनहरु लीन भन्दा राम्रो छ जब। बाफ डिजाइन गर्दा fanciful आकार र रंग कष्टप्रद जोगिन। यहाँ आँखा एक बाँकी मानिस अतिरिक्त र अनावश्यक विवरण अपनाउँछन् छैन भनेर अन्तरिक्ष सङ्गठित हुनुपर्छ। कोठा को वातावरणमा नकारात्मक insularity र अन्तरिक्ष को सानो आकार emphasizing तत्व प्रभाव पारेको गरिनेछ, त्यसैले तिनीहरूलाई देखि, पनि, त्यागेर हुनुपर्छ। यो कोनों अदृश्य थिए भनेर एक भाप कोठा डिजाइन। तपाईं फ्रेम र झालर बोर्डहरू प्रयोग गर्छन् भने यो, सरल छ। को स्नान मा डिजाइन lounges मौज को मामला मा, तपाईं कल्पना देखाउन र कुनै पनि खुसी तुल्याउने शैली मा कोठा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो निर्देशन निर्धारण गर्न मात्र रहेको छ। क्लासिक शैली काठ बनेको परम्परागत फर्नीचर को साधारण कोठा को प्रयोग पनि समावेश छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आधुनिक शैली लागि - सान्त्वना, तपाईं upholstered फर्नीचर र कम तालिका गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ त। सबैभन्दा हडताली रुझान को एक - तपाईं quirky र असामान्य वस्तुहरू वरिपरि प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ जो eclecticism, ढोका ह्यान्डल संग शुरू र बस्ने संग खत्म। अर्को मूल समाधान - एक कोठा राष्ट्रिय रंग (रूसी, अफ्रीकी, उत्तर) अनुसार बनेको छ जसमा ethno शैली,। देश शैली ठूलो छाला फर्नीचर, विशाल छत, सजावट मा काठ को धेरै समावेश छ। Phlox: क्रमबद्ध Phlox - हाम्रो उद्यान सबैभन्दा लोकप्रिय फूल को छ। यो ग्रीक शब्द "लौ" बाट आफ्नो नाम मिल्यो। तिनीहरूलाई लागि खेती र हेरविचार विशेष गाह्रो छैन। Phlox profusely blooming र एक लामो समय को लागि - जुलाई देखि चिसो सम्म। फूल, Shades को एक किसिम देखि हो एक कमजोर स्वाद छ। बगैंचामा र पत्थर curbs, mixborders र एकल landings मा हुन सक्छ phlox प्रयोग गर्नुहोस्। रोड phlox मात्र Drummond Annuals बुझाउँछ जो लगभग 50 प्रजाति, छ, र सबै बाँकी - एक बारहमासी कारखाना छ। Phlox प्रत्येक प्रजाति भित्र, यो फूल धेरै प्रजातिहरू छन्। फूल को समय मा निर्भर सबै phlox विभाजित छ: प्रारम्भिक (जुन-जुलाई);
Chlamydia - घर उपचार Chlamydia - आधुनिक mores कमी भन्न सकिन्छ कि एक रोग। यो अनुपचारित chlamydia बायाँ, नतिजाको धेरै दुःखी हुन सक्छ भने त्यो एकदम गम्भीर छ जस्तो देखिन्छ। विशेष खतरा यस रोग एक गर्भावस्था योजना गरिरहेका प्रजनन उमेर महिलाहरु को लागि प्रस्तुत। Chlamydia - निष्फलता एक साधारण कारण, र गर्भावस्था को प्रारम्भिक समापन, preterm वितरण, भ्रूण संक्रमण। रोग को प्रभाव धेरै स्थानीय चरित्र, त्यसैले chlamydia व्यवहार गर्न चाहे को प्रश्न मात्र संग, विविध, के छैन हुन सक्छ। कसरी chlamydia व्यवहार गर्न?
तपाईंको बिल्ली आदेश सिकाउन कसरी? तपाईं सबै यो गर्न सक्छन् कि धेरै मानिसहरू एक चाल्नी गर्न, कसरी, घरमा बिरालो तालिम?
ठूलो नस्ल कुकुर एक विशाल कुकुर व्यापक कि को प्रशंसा, या मान्छे घरमा यस्तो ठूलो जनावर जन्म दिन किन यो स्पष्ट छैन भन्ने तथ्यलाई को त्रास छ जब?
Unbelievable तर साँचो - उपयोगी गपशप करते "तपाईं थाह थियो", "तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ" -?
शीतल Curler तिनीहरूले सुत्दा घन्टा छैन जो नरम भागहरु, मा व्यवस्थित छन् रूपमा शीतल Curler, रात थाकबनाउदै लागि आदर्श छलफल गर्न सकिन्छ। नरम curlers के-के हुन्?